Drying Oven Factory - China Drying Oven Manufacturers, Suppliers
DRK616 Vacuum Drying Oven (microcomputer ine nguva)
Chigadzirwa Tsananguro: Chizvarwa chitsva chevacuum yekuomesa oveni, zvichibva pamakore mazhinji ekambani ekubudirira kwechiitiko mukudziya kwebhokisi, kuburikidza nekuenderera mberi kunorwadza kutsvaga, kubudirira muhunyanzvi hwechinyakare uye nekugadzira kugadzirisa "bhodhoro" mukupisa conduction process-kuwana kupisa kwakakwana. conduction nzira.Kushandiswa Kwechigadzirwa: Vacuum drying oven yakanyatsogadzirirwa kupisa-sensitive, nyore kuparara uye nyore oxidized zvinhu, uye inogona fil...
DRK612 High Temperature Kuputika Kuomesa Ovheni-Fuji Controller
I-electrothermal high-temperature blast drying oven inoshandiswa zvakanyanya mumagetsi uye mechanical, makemikari, plastiki, chiedza indasitiri uye mamwe maindasitiri uye nesainzi tsvakurudzo zvikamu zvekubika, kuomeswa, kurapa, kupisa kupisa uye kumwe kupisa kwezvinhu zvakasiyana-siyana uye masampuli.
DRK252 Drying Oven ine Standard Large-screen LCD
1: Yakajairwa hombe-screen LCD kuratidza, inoratidza akawanda seti yedata pane imwe skrini, menyu-mhando yekushanda interface, iri nyore kunzwisisa uye kushanda.2: Iyo fan yekumhanyisa control mode inogamuchirwa, iyo inogona kugadziridzwa zvakasununguka zvinoenderana neakasiyana kuyedza.
DRK252 drying oven
Iyo DRK252 yekuomesa oveni yakagadzirwa nekambani yedu yakagadzirwa nezvinhu zvakanakisa uye hunyanzvi hwekuita.Yakagadzirwa uye inogadzirwa zvinoenderana neakakodzera zviyero zvemidziyo yekuyedza.
DRK-6000 Series Vacuum Drying Ovheni
Vacuum drying oven yakanyatsogadzirirwa kuomesa kupisa-sensitive, nyore kuora uye nyore oxidized zvinhu.Inogona kuchengetedza imwe dhigirii yevacuum muimba yekushanda panguva yebasa, uye inogona kuzadza mukati neinert gasi, kunyanya kune zvimwe zvinhu zvine maitiro akaoma.
Vertical blast oven inokodzera zvakasiyana-siyana zvigadzirwa kana zvinhu uye midziyo yemagetsi, zviridzwa, zvikamu, zvemagetsi, zvemagetsi nemotokari, ndege, nhare, mapurasitiki, michina, makemikari, chikafu, makemikari, hardware uye maturusi mumamiriro ekunze ekupisa.